Booliiska Sweden oo diidey xisbi Danish ah oo doonayey inay kutaabka Qur’aanka ku gubaan Stockholm (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Booliiska Sweden oo diidey xisbi Danish ah oo doonayey inay kutaabka Qur’aanka...
Booliiska Sweden oo diidey xisbi Danish ah oo doonayey inay kutaabka Qur’aanka ku gubaan Stockholm (Dhegeyso)
(Stockholm) 11 Sebt 2020 – Booliska ayaa diiday in ay oggolaasho siiyaan isu imaatin uu xisbi ka dhisan Danmark uu ku qorsheynayay in uu ku gubo Quraanka dhammaadka toddobaadkan meelo kala duwan oo Stockholm.
Goobaha la soo codsaday in lagu banaanbaxo waxay ku yaallaan meelo hore ay ugu jiraan khilaaf oo ka dhalan kara iska hor imaad.
Halkan hoose ka dhegeyso….
Previous articleDEG DEG: Baxrayn oo ogolaatay inay xiriir rasmi ah la yeelato Israel
Next article”Waa in lala wareegaa carruurta ku nool degaannada xun!” – In carruurta lala wareego oo la sahli doono (Dhegeyso)